UDeezer ubhengeza ukuDityaniswa kwePodPod | Ndisuka mac
Olunye ukhetho abasebenzisi bePodPod abangafumanekiyo kukudlala umculo kubo ngokuthe ngqo kwamanye amaqonga ngaphandle kweApple Music uqobo. Inkampani yaseCupertino yongeze i-API entsha evumela abasasazi bomculo abasasazayo kunye namaqonga ukongeza iinkonzo zabo kwiPod yasekhaya.
Kule meko, uDeezer usandula ukubhengeza ukufumaneka kwezi zixhobo zeApple, Oko kukuthi, ngoku singacela uSiri ukuba abeke umculo kuthi ngqo kwiDeezer kwaye uyidlale kwiPodPod yethu. Ngokusengqiqweni kufuneka ubhalisele kule nkonzo umculo osasazayo onikezelwa kumgangatho ophezulu, kwisisombululo esiphakamileyo.
Hei Siri, nxiba umculo weDeezer
Kwaye le yenye yee-odolo ezinokuthi ngoku zinikezwe umncedisi weApple, ukuqala ukudlala umculo kwiPodPod ngqo kwiDeezer. "Hei Siri, dlala umculo weDeezer" okanye Hei Siri, dlala (ingoma) evela eDeezer kwaye ngokuzenzekelayo oku iya kuqala ukudlala ngeePod yasekhaya.
Namhlanje izithethi ezikrelekrele sele ziyinxalenye yekhaya lethu kwaye abasebenzisi abaninzi bakhethe i-HomePod mini ngexabiso layo lemali. Esi sithethi asinawo amandla afanayo esandi okanye umgangatho ofanayo onokunikwa yimodeli enkulu yeKhayaPod kodwa inokuba luncedo kulo msebenzi kwaye oko kukuthi umculo uzakudlalwa ngomgangatho ophezulu.
KwiApple baya kusebenza ukongeza umgangatho wezandi ongcono kwinkonzo yabo yomculo iApple Music Esi sisityholo esijikeleze umnatha kwiintsuku ezimbalwa kwaye banokugqibela ngokubhengeza kwi-WWDC kulo nyaka, ngoJuni. Okwangoku, into esiyiqondileyo yile yokuba iDeezer inokudlalwa ngalo mgangatho wesandi kwiiPodPods zasekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UDeezer ubhengeza ukuDityaniswa kwePodPod yasekhaya